China Double row tapered roller bearings Fanamboarana sy Factory | CMC
Tsia. Mitondra No. Refy fetra
Ny laharan-jiro mitapoka misy laharana tokana dia misy peratra ivelany, ny peratra anatiny sy andiana fantsom-baravarankely dia fivondronan'ny peratra anatiny mihidy tranom-borona miendrika harona. Ny peratra ivelany dia azo sarahina amin'ny fivorian'ny peratra anatiny. Araka ny fenitra fitetezana tapered ISO misy fari-pitsipika ivelany, ny karazana fantsom-panafody misy peratra ivelany na fivondronan'ny peratra anatiny dia tokony hahatratra ny zom-pirenena miaraka amin'ny karazana peratra ivelany na fifanakalozana peratra anatiny. Izany hoe, ankoatry ny refy ivelany sy ny fandeferana ny peratra ivelany amin'ny maodely mitovy amin'izany, izay tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny ISO492 (GB307), ny zoro kônà sy ny savaivony eo amin'ny vatan'ny peratra anatiny dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna mifandraika amin'izany ihany koa. ho an'ny fifanakalozana.
Amin'ny ankapobeny, ny zoro voasaron'ny hazakazaka ivelany dia misy eo anelanelan'ny 10 ° sy 19 °, izay mahazaka ny hetsika mitambatra sy ny enta-mavesatra miaraka amin'ny enta-mavesatra. Arakaraka ny maha lehibe ny zoro cone, ny lehibe kokoa ny mahazaka ny axial load. Ny bearings miaraka amin'ny zoro taper lehibe, ampio B ny kaody aoriana, ary ny zoro taper dia eo anelanelan'ny 25 ° ~ 29 °, izay mahazaka enta-mavesatra lehibe kokoa. Ho fanampin'izany, ny tadin'ny roller misy tsipika tokana dia afaka manitsy ny haben'ny fahazoan-dàlana mandritra ny dingan'ny fametrahana.
Ny peratra ivelany (na peratra anatiny) misy fitambaran-tsipika misy tapered roa dia iray manontolo. Ny tarehy faran'ny kely amin'ny vava anatiny roa (na ny peratra ivelany) dia mitovy, ary misy spacer eo afovoany. Ny fahazavana dia ahitsy amin'ny hatevin'ny spacer. Ny hatevin'ny spacer dia azo ampiasaina ihany koa mba hanitsiana ny mialoha ny fanelingelenana ny fitaterana rojom-baravarankely misy tsipika roa.
Bearings miloloha tapered efatra. Ny fanatanterahana an'io karazana fiterahana io dia mitovy amin'ny an'ny bearings roller tapered roa sosona, saingy mitondra enta-mavesatra lehibe kokoa noho ny bearings roller tapered rojom-bolo ary manana hafainganam-pandeha kely ambany. Ampiasaina indrindra amin'ny milina mavesatra izy io.
Multi-voaisy tombo-kase roa sy efatra-andalana tapered roller bearings, ZWZ dia manome fiainana lava, multi-voaisy tombo-kase roa ary efatra-andalana tapered roller bearings. Mitondrà famolavolana vaovao sy manokana an'ny fiterahana, manova ny fomba famolavolana nentin-drazana ny fitehirizana voahidy tanteraka, ary mandray karazana rafitra famehezana vaovao izay manambatra ny fisorohana tombo-kase sy ny vovoka hanatsarana ny tombo-kase ary hanatsara ny fahombiazan'ny famehezana. Raha ampitahaina amin'ny firafitry ny firafitra misokatra, ny fitondra miisa roa misy tombo-kase avo roa heny sy efatra sosona dia afaka mampitombo ny fiainany amin'ny 20% ka hatramin'ny 40% ary mampihena ny fihinanana lubricant amin'ny 80%.
Teo aloha: Double row tapered roller bearings
Taper Roller Bearing Arrangement, Roller Pin Bearings, Heavy Rolling Bearings, Mitondra Ball feno famenony, Mitondra tena eo amin'ny fitondrana baolina, Inch Single Row,